Abenzi bekhofi abahle kunye nabasebenza ngesandla | IBezzia
Ukulungiselela ikofu yeyethu uninzi lwesiko apho ukonwaba kunye noxolo kuqala phakathi kwentsasa okanye emva kwemini. Ukwenza njalo sinezinto ezininzi esinokuthi sizenze, ekubeni abenzi bekhofi abasebenza ngesandla ukuba namhlanje sicebisa okona kulungileyo ukuphumeza ikofu ethe-ethe kodwa nencasa eninzi.
Intle, iyasebenza kwaye ayinazingcingo, Nantsi indlela abenzi bekhofi abachaphaza ngayo esiya kuphakamisa namhlanje eBezzia. Zonke zixhotyiswe ngesihluzo apho kugalelwa khona ikofu yomhlaba kunye nalapho kugalelwa khona amanzi ashushu ngesandla kodwa ngee-shades ezahlukeneyo zokufaka ikofu. Melitta, Chemex okanye Hario, ukhetha!
Kangangeenkulungwane, ikofu ibilungiswa ngokufudumeza ikofu esembizeni yamanzi. Kwaye ngaba matshini bekhofi abathi ngandlela thile bagcine loo nto kodwa baphucule incasa yokugqibela yekofu. Kulula ukuyisebenzisa, banayo izibonelelo ezininzi ngaphezulu kwezinye iintlobo zokwenza ikofu:
Bathatha indawo encinci ekhitshini.
Zilula kwaye zihamba lula.
Bahle. Zijongeka zintle kwi Itafile yekhitshi.
Ukulula kwayo kwenza ukuba ukuqina kwayo kuphakame.
4 Uyenza njani ikofu
Ngaba uyazi ukuba yayingumsunguli weMelitta owasungula ukucoca ikofu ngo-1908? Emva kwexesha, kwi-30s UMelitta Bentz wazise amacebo okucoca ulwelo ephucule umgangatho wekofu ngokuvelisa indawo enkulu yokutsalwa kwayo. Iifilitha esizaziyo namhlanje kwaye zibe luphawu lwenkampani.
Uya kufumana kwikhathalogu yaseMelitta iplastiki, iglasi kunye nabanini beefilitha zokucoca ngemijelo emitsha eqinisekisa ukuba ikhutshwa ngokulinganayo ikofu. Ukongeza, ukuvulwa kwayo kabini kuyakuvumela ukuba wabelane ngokonwaba ngokusela ikofu, kuba ungazilungiselela ezimbini ngaxeshanye. Kwaye ayizukubiza ngaphezulu kwe- € 17.
I-portafilters ngokudibeneyo ne-Melitta Pour Over carafe yeglasi isakuvumela nanamhlanje yenza ikofu ngendlela elula nenomtsalane Inani elininzi labantu. I-carafe yenziwe ngeglasi ye-borosilicate kwaye inokusetyenziswa kunye nolwelo olushushu okanye olubandayo ngaphandle komngcipheko wokophuka. Ilungele i-microwave kwaye ngenxa yesiciko sayo esisuswayo inokuhlanjwa ngokulula kwindawo yokuhlamba iimpahla.
Ijogilikhi yeChemex yeglasi yenziwa ngusokhemisi waseJamani uPeter Schlumbohm ngo-1941. Uyilo lwayo olucocekileyo nolulula Yenza ibonakale intle ngaphezulu kwayo nayiphi na imiphezulu yeetafile. Imodeli enesiphatho somthi ibetha ngokukodwa, kunye nokubonelela ngemfudumalo kuyilo, iya kukuthintela ekutshiseni xa ubambe iglasi eshushu.
Abenzi bekhofi abagcinwe ngesandla bafumaneka ngobukhulu obahlukeneyo ukupheka ukusuka kwiikomityi ezintathu ukuya kwishumi elinesithathu. Kwaye uyilo lweefilitha zayo zefayibha zikhethekileyo, Ungaphezulu kokhuphiswano ukugcina izinto ezikrakra, ioyile kunye neenkozo ngaphandle kwendebe yakho.
IHario yasekwa eTokyo ngo-1921 kwaye ekuqaleni yavelisa iimveliso zeglasi zeelebhu zamachiza. Isixhobo sakho esithandwa kakhulu seV60, Yaphuculwa ukuphucula ii-portafilters ezazikho ngelo xesha. Nge-angle engama-60º, amanzi ahamba esiya kumbindi wokugaya, ukwandisa ixesha lokunxibelelana.
Le carafe kunye necone iseti ukwenza ikofu ehluziweyo ilungile ukuze, ngexabiso elifikelelekayo (€ 25), ube nayo into oyifunayo yokwenza icofa lokucoca ulwelo ngokufanelekileyo ekhaya. Ukufezekisa oku, kufuneka ulandele nje imiyalelo yenkampani.
Uyenza njani ikofu
Nokuba yeyiphi na into oyenzayo xa usenza umenzi wekofu, indlela yokulungisa ikofu iya kufana kakhulu eyahlukileyo kuphela umlinganiso wekofu kunye namanzi ayimfuneko ukufumana iziphumo ezilungileyo. Ukuthambisa isihluzo ngamanzi ashushu, ubunzima bomhlaba wekofu eziziinkozo eziphakathi kunye nokuyihambisa ngokulinganayo kwisihluzi ngamanyathelo okuqala okulandela.
Ke kufuneka ubasele amanzi kwaye uwagalele kwijog gooseneck. Ngoba? kuba ngale nto kuya kuba lula kuwe ukongeza amanzi ashushu ngaphezulu kwekofu kwiisetyhula ukusuka kwiziko ukuya ngaphandle. Iqondo lobushushu lamanzi nalo liya kubaluleka; Kufuneka ibephakathi kwama-90 ukuya kuma-94 degrees. Ukuba awunayo ithemometha, kuya kwanela ukuba unyathele malunga nemizuzwana engama-40 emva kokuba ibile.
Zininzi iividiyo ku-YouTube ezineengcebiso ezisebenzayo zokusebenzisa aba benzi bekhofi yedriphu, jonga bona!
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ikhaya » Ukupheka » Abenzi bemveliso yekofu entle kunye nesebenzayo